Myanmar IT Resource Forum » Garbage » သိချင်လို့နော် [Problem]
1 သိချင်လို့နော် [Problem] on 27th April 2010, 8:32 pm
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာလေး ကို windows XP black edi တင်ထားတယ် ။ နှစ်ရက်လောက်နေရင် windows မတက်တော့ဘဲနဲ power ပွင့်ပြီး နေတောတယ်။ welcome ကိုမရောက်တောဘူး။ စက်ကအသစ် ၀ယ်လာတောvista နဲပါ။ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတင်လိုက်တော အဲလိုဖြစ် သွားတယ်။ကူညီပြိးပြောပါဦး။
2 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 28th April 2010, 12:51 pm
စက်က Latop လား desktop လား။
Laptop ဆိုရင် CMOS ထဲဝင်ပြီး SATA MODE မှာ AHCI ပြောင်းကြည့်ပါလား။
Desktop ဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း New Window ပေါ့။
3 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 28th April 2010, 8:01 pm
latop ပါအကို လုပ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ကျွန်တော်windows တင်တာ3 ခါရှိပြီအကို။
windows7,vista , XP black နောက်ဆုံးကတော black XP တင်ထားပါတယ်။ လုပ်ကြည်လိုက်ဦနော် အခုလိုပြောပေးတဲအတွက်ကျေးဇူး။
4 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 29th April 2010, 7:57 pm
စက်စ၀ယ်လာတုန်းကပါတဲ့ windows vista version ကိုပဲပြန်တင်ကြည့်ပါလား
တချို့ vista series laptop တွေက xp နဲ့မရဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်းကြုံဖူးပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 29th April 2010, 9:10 pm
6 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 6th May 2010, 4:35 pm
mmit service team ကိုအပ်မလား
လက်ခသိပ်မများပါဘူးပြင်ပေးမယ်လေ။ ၁၀မိနစ်ပဲစောင့်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 6th May 2010, 8:13 pm
MITR Service Team လာရမလား။
8 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 13th June 2010, 11:58 am
အကိုရေ windows7 တင်ကြည်.လေနော် ရလောက်တယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 13th June 2010, 1:09 pm
computer password မေ့နေလို့ကူညီကြပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 16th July 2010, 7:58 am
gowlsnow wrote: computer password မေ့နေလို့ကူညီကြပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဘယ်လိုမေ့နေတာ လည်း ဆိုတာကို နားလည်အောင် ပြန်ပြောပြလို့ ရမလား အကို
ရေ admin password မေ့နေတာလား
Bios Password ဆိုရင်တော့
Bios Password ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့တွက် အောက်ပါတိုင်းကျော်ဖြတ်နိင်ပါတယ်
အပေါ်က အဆင့် ၄ ဆင့်နဲ့ ပေးထားပါတယ်
သွားကြည့်လိုက်ပါနော် admin password ဆိုရင်တော့ နောက် ထပ်ပြန်ပြောပေးပါ့မယ်
Last edited by solakoko on 16th July 2010, 8:33 am; edited 1 time in total (Reason for editing : code)
11 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 7th December 2010, 1:44 pm
ကျွန်တော့် laptop မှာ harddisk ကို format ရိုက် လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲ
windows တင်ရင် လည်း error တက်နေတယ်
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ
ကူညီ ပေးကြပါလား ဗျာ
12 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 7th December 2010, 5:27 pm
gowlsnow wrote: ကျွန်တော့် laptop မှာ harddisk ကို format ရိုက် လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲ
ကျွန်တော်တစ်ခုအကြံပေးမယ် linux တင်လိုက် ပြီးတော့ window ပြန်တင်ကြည့်
xp and win7တစ်ခုစီပြန်ချိန်းပြီးတင်
13 Re: သိချင်လို့နော် [Problem] on 7th December 2010, 8:00 pm
၀ယ်လာတုန်းက ပါလာတဲ့ အခွေနဲ့ပြန်ပြီး format ချလိုက်
ရတယ် ။ မရရင် windows ခွေတွေ တစ်ခုခြင်းလိုက်ထည့်ပြီး format ချ
မရရင် ကျွန်တော်ဆိုင်ကို လာပြီး ပိုက်ဆံလာပေး လုပ်ပေးမယ် ။ windows ဘဲတင်မယ်ဆိုရင် 3000 ဘဲ ကျမှာနော် (ဆိုင်မှာလာတင်ရင်ပြောတာနော်)။
စိတ်ဝင်စားရင် Ph: 73052659 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။
14 Re: သိချင်လို့နော် [Problem]